မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျ 3-1 ဘနျလေ ပှဲအပွီး ထူးထူးခွားခွား ထုတျနုတျမှတျသား ပွောစရာ7ခကျြ – Sports A2Z
ဂရငျးဝုဒျက လိဂျဂိုး ၃ ဂိုးဆကျသှငျးပွီး တကြော့ပွနျ ခတျေစားလာခဲ့ပွနျပါတယျ။ စပါးဈကို ပှဲသိမျးဂိုးသှငျးခဲ့သလို အခုပှဲမှာလညျး ယူနိုကျတကျအတှကျ ဦးဆောငျဂိုး ၂ ဂိုးကို သှငျးယူပွီး မနျစီးတီးကို စိနျချေါဖို့ ယူနိုကျတကျကို အဖိုးတနျ ၃ မှတျ ရယူပေးခဲ့တာက သူ့အသငျးကို အမှတျပေးဇယားဦးဆောငျမှုနဲ့ ၈ မှတျအကှာကို ရောကျလာစခေဲ့တယျ။
ပေါ့ဘာရဲ့ အကောငျးဆုံးနရောကို ဆိုးလျရှားဆုံးဖွတျနိုငျပွီလား
ပေါ့ဘာက ပထမပိုငျးမှာ ဘယျခွမျးတိုကျစဈမှာ ခွမွေူးနခေဲ့တယျ။ လုချရှောနဲ့တှဲပွီး ဘနျလကေို ကောငျးကောငျးနှိပျစကျခဲ့တယျ။ သူ့ရဲ့ ပိရိတဲ့ ဘောလုံးပေးပို့မှုကွောငျ့ ယူနိုကျတကျက ဂိုးရခဲ့တယျ။ ဒုတိယပိုငျးမှာတော့ ဖရကျဒျနရော ကာဗာနီ လူစားဝငျလာခဲ့တော့ ပေါ့ဘာက ကှငျးလယျဗဟိုကို ပွနျဆငျးကစားခဲ့ရတယျ။ ဘယျခွမျးတိုကျစဈမှာ ပေါ့ဘာကို ဆကျသုံးမယျဆိုရငျ ကှငျးလယျလူ ၃ ဦး ကစားကှကျကို ရှေးခယျြမလားလို့ ဆိုးလျရှားက အခြိနျယူစဉျးစားရမှာပါ။
Set-piece တှမှော ကဆြုံးနဆေဲ သရဲနီ
သရဲနီခံတပျက တညျကနျဘောတှမှော ပွိုငျဘကျရဲ့ အသုံးခဖြွဈနဆေဲပါ။ ပွဈခကျြမြားလှနျးတဲ့ ခံစဈပွငျဆငျမှုက တညျကနျဘောကတဆငျ့ ဂိုးခဏခဏပေးနရေတဲ့ ထုံးစံအတိုငျး ဒီနမှေ့ာ ဘနျလရေဲ့ခေါငျးတိုကျဂိုးကို ခှငျ့ပွုခဲ့ရပွနျတယျ။ ဒါက မကျဂှိုငျးယားရဲ့ အမှားလညျးဖွဈခဲ့ပါတယျ။
Super-sub သူရဲကောငျးဖွဈလာတဲ့ ကာဗာနီ
ကာဗာနီက ဒုတိယပိုငျးစတာနဲ့ လူစားဝငျလာခဲ့တယျ။ သူဝငျလာခွငျးက ပွိုငျဘကျခံစဈကို အလုပျမြားစခေဲ့ပွီး ရကျရျှဖို့ဒျနဲ့ ဂရငျးဝုဒျတို့ကို ဘနျလဂေိုးဧရိယာထဲ နရောလှတျမြားမြား ရစခေဲ့တယျ။ စပါးဈနဲ့ပှဲမှာ အဖိုးတနျ အနိုငျဂိုးသှငျးယူခဲ့သလို အရေးပါတဲ့ လူစားဝငျ သှငျးဂိုးအဖွဈ ယူနိုကျတကျအတှကျ ၄ ဂိုးသှငျးယူပွီးဖွဈတယျ။
တိုကျစဈမှာ ကစားပုံမွူးလာတဲ့ လုချရှောနဲ့ ဘဈဆာကာအတှဲရဲ့ တတပျတအား
ဒီနောကျခံလူ နှဈဦးစလုံးက တိုကျစဈအားနညျးလှနျးလို့ ဒီအားနညျးခကျြကိုပွငျပွီး အသငျးတိုကျစဈကစားပုံကို တတပျတအား အကြိုးပွုဖို့ ခဏခဏ တိုကျတှနျးခံရတယျ။ ဒါက အခု တကယျလကျတှဖွေ့ဈလာပွီလို့ ဆိုရမှာပါ။ လုချရှောကတော့ ယူနိုကျတကျရဲ့ တနှဈတာအကောငျးဆုံးကစားသမားဆုကို သိမျးပိုကျလာတော့မယျ့အထိ ခြီးကြုးစရာကောငျးသလို သူ့ခွစှေမျးက အတျောလေးထိရောကျပွီး ရပေနျးစားလာခဲ့တယျ။
ယူနိုကျတကျရဲ့ နံပါတျ ၁ ဂိုးသမားအဖွဈ စိတျမခရြသေးတဲ့ ဟနျဒါဆနျ
ဟနျဒါဆနျက ဒဟဲယားလောကျ ဂိုးပေါကျကို စိတျခရြစပွေီလားဆိုတဲ့ အကဲဖွတျမှုကပဲ သူ့ကို အသငျးရဲ့ နံပါတျ ၁ ဂိုးသမားနရောအတှကျ အဆုံးအဖွတျပေးသှားမှာပါ။ ဒါက ဒဟဲယားကို ကြျောဖွတျပွီး ပှဲထှကျလိုတဲ့ သူ့အတှကျ ကွိုတငျပွငျဆငျစရာလညျးဖွဈတယျ။ ဒီနမှေ့ာတော့ ဘနျလရေဲ့ခေါငျးတိုကျဂိုးကို သူကာကှယျနိုငျခဲ့သငျ့ပါတယျ။
EPL ၅ ပှဲဆကျအနိုငျနဲ့ တူညီတဲ့ လကျစားခမြှေုကို ယူနိုကျတကျအောငျမွငျမလား?
မနျခကျြစတာနှဈသငျးက လကျကနျြ ၆ ပှဲသာ ကစားဖို့ ရှိတော့တယျ။ ယူနိုကျတကျရဲ့ အိုးထရကျဒျဖို့ဒျနိုငျပှဲအပွီးမှာ အဆငျ့ ၁ နဲ့ ၂ အကွား ၈ မှတျသာကှာတော့တယျ။ ဒီရာဇဝငျက ၂၀၁၂ ခုနှဈက တခါဖွဈဖူးတယျ။ အဆငျ့ ၂ နရောက မနျစီးတီးက လကျကနျြ ၆ ပှဲ ၈ မှတျအကှာက ယူနိုကျတကျကို ကြျောဖွတျပွီး EPL ဗိုလျဖွဈခဲ့တယျ။ ဖာဂူဆနျကို ရှော့ချရစခေဲ့တယျ။ အခုတခေါကျမှာတော့ ယူနိုကျတကျက ထပျတူညီလကျစားခမြှေုကို အောငျမွငျနိုငျမလားဆိုတာကတော့။
ဂရင်းဝုဒ်က လိဂ်ဂိုး ၃ ဂိုးဆက်သွင်းပြီး တကျော့ပြန် ခေတ်စားလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ စပါးစ်ကို ပွဲသိမ်းဂိုးသွင်းခဲ့သလို အခုပွဲမှာလည်း ယူနိုက်တက်အတွက် ဦးဆောင်ဂိုး ၂ ဂိုးကို သွင်းယူပြီး မန်စီးတီးကို စိန်ခေါ်ဖို့ ယူနိုက်တက်ကို အဖိုးတန် ၃ မှတ် ရယူပေးခဲ့တာက သူ့အသင်းကို အမှတ်ပေးဇယားဦးဆောင်မှုနဲ့ ၈ မှတ်အကွာကို ရောက်လာစေခဲ့တယ်။
ပေါ့ဘာရဲ့ အကောင်းဆုံးနေရာကို ဆိုးလ်ရှားဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီလား
ပေါ့ဘာက ပထမပိုင်းမှာ ဘယ်ခြမ်းတိုက်စစ်မှာ ခြေမြူးနေခဲ့တယ်။ လုခ်ရှောနဲ့တွဲပြီး ဘန်လေကို ကောင်းကောင်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ ပိရိတဲ့ ဘောလုံးပေးပို့မှုကြောင့် ယူနိုက်တက်က ဂိုးရခဲ့တယ်။ ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ ဖရက်ဒ်နေရာ ကာဗာနီ လူစားဝင်လာခဲ့တော့ ပေါ့ဘာက ကွင်းလယ်ဗဟိုကို ပြန်ဆင်းကစားခဲ့ရတယ်။ ဘယ်ခြမ်းတိုက်စစ်မှာ ပေါ့ဘာကို ဆက်သုံးမယ်ဆိုရင် ကွင်းလယ်လူ ၃ ဦး ကစားကွက်ကို ရွေးချယ်မလားလို့ ဆိုးလ်ရှားက အချိန်ယူစဉ်းစားရမှာပါ။
Set-piece တွေမှာ ကျဆုံးနေဆဲ သရဲနီ
သရဲနီခံတပ်က တည်ကန်ဘောတွေမှာ ပြိုင်ဘက်ရဲ့ အသုံးချဖြစ်နေဆဲပါ။ ပြစ်ချက်များလွန်းတဲ့ ခံစစ်ပြင်ဆင်မှုက တည်ကန်ဘောကတဆင့် ဂိုးခဏခဏပေးနေရတဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဒီနေ့မှာ ဘန်လေရဲ့ခေါင်းတိုက်ဂိုးကို ခွင့်ပြုခဲ့ရပြန်တယ်။ ဒါက မက်ဂွိုင်းယားရဲ့ အမှားလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Super-sub သူရဲကောင်းဖြစ်လာတဲ့ ကာဗာနီ
ကာဗာနီက ဒုတိယပိုင်းစတာနဲ့ လူစားဝင်လာခဲ့တယ်။ သူဝင်လာခြင်းက ပြိုင်ဘက်ခံစစ်ကို အလုပ်များစေခဲ့ပြီး ရက်ရ်ှဖို့ဒ်နဲ့ ဂရင်းဝုဒ်တို့ကို ဘန်လေဂိုးဧရိယာထဲ နေရာလွတ်များများ ရစေခဲ့တယ်။ စပါးစ်နဲ့ပွဲမှာ အဖိုးတန် အနိုင်ဂိုးသွင်းယူခဲ့သလို အရေးပါတဲ့ လူစားဝင် သွင်းဂိုးအဖြစ် ယူနိုက်တက်အတွက် ၄ ဂိုးသွင်းယူပြီးဖြစ်တယ်။
တိုက်စစ်မှာ ကစားပုံမြူးလာတဲ့ လုခ်ရှောနဲ့ ဘစ်ဆာကာအတွဲရဲ့ တတပ်တအား
ဒီနောက်ခံလူ နှစ်ဦးစလုံးက တိုက်စစ်အားနည်းလွန်းလို့ ဒီအားနည်းချက်ကိုပြင်ပြီး အသင်းတိုက်စစ်ကစားပုံကို တတပ်တအား အကျိုးပြုဖို့ ခဏခဏ တိုက်တွန်းခံရတယ်။ ဒါက အခု တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်လာပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။ လုခ်ရှောကတော့ ယူနိုက်တက်ရဲ့ တနှစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကို သိမ်းပိုက်လာတော့မယ့်အထိ ချီးကျုးစရာကောင်းသလို သူ့ခြေစွမ်းက အတော်လေးထိရောက်ပြီး ရေပန်းစားလာခဲ့တယ်။
ယူနိုက်တက်ရဲ့ နံပါတ် ၁ ဂိုးသမားအဖြစ် စိတ်မချရသေးတဲ့ ဟန်ဒါဆန်
ဟန်ဒါဆန်က ဒဟဲယားလောက် ဂိုးပေါက်ကို စိတ်ချရစေပြီလားဆိုတဲ့ အကဲဖြတ်မှုကပဲ သူ့ကို အသင်းရဲ့ နံပါတ် ၁ ဂိုးသမားနေရာအတွက် အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားမှာပါ။ ဒါက ဒဟဲယားကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ပွဲထွက်လိုတဲ့ သူ့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်စရာလည်းဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ဘန်လေရဲ့ခေါင်းတိုက်ဂိုးကို သူကာကွယ်နိုင်ခဲ့သင့်ပါတယ်။
EPL ၅ ပွဲဆက်အနိုင်နဲ့ တူညီတဲ့ လက်စားချေမှုကို ယူနိုက်တက်အောင်မြင်မလား?
မန်ချက်စတာနှစ်သင်းက လက်ကျန် ၆ ပွဲသာ ကစားဖို့ ရှိတော့တယ်။ ယူနိုက်တက်ရဲ့ အိုးထရက်ဒ်ဖို့ဒ်နိုင်ပွဲအပြီးမှာ အဆင့် ၁ နဲ့ ၂ အကြား ၈ မှတ်သာကွာတော့တယ်။ ဒီရာဇဝင်က ၂၀၁၂ ခုနှစ်က တခါဖြစ်ဖူးတယ်။ အဆင့် ၂ နေရာက မန်စီးတီးက လက်ကျန် ၆ ပွဲ ၈ မှတ်အကွာက ယူနိုက်တက်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး EPL ဗိုလ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဖာဂူဆန်ကို ရှော့ခ်ရစေခဲ့တယ်။ အခုတခေါက်မှာတော့ ယူနိုက်တက်က ထပ်တူညီလက်စားချေမှုကို အောင်မြင်နိုင်မလားဆိုတာကတော့။